RAVELONANOSY MAMITIANA : MANOHANA NY HEVITRY NY FFKM ISIKA – MyDago.com aime Madagascar
RAVELONANOSY MAMITIANA : MANOHANA NY HEVITRY NY FFKM ISIKA
Nitohy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny vahoaka mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny Ct Ravelonanosy Mamitiana. Krismasy hoy izy tamin’ny Talata teo noho izany dia manolotra ny fiarahabana antsika rehetra. Ho lasa teny ilay andininy faha 20 hoy izy ka ho hitantsika eo amin’ity Janoary ity. Tadidio fa isaky ny janoary isika dia misy ny iray maka bahana, ny roa fiomanana, ary telo dia lasa. Ny zavadehibe amintsika hoy ity olomboantendry ity dia ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Tonga eto izy dia olona tomponandraikitra teto amin’ny firenena, ary mpanao politika nampandroso an’i Madagasikara satria nanana tetikasa fampandrosoana. Tsarovy hoy izy fa i Dada dia filohan’ny antoko Tim. Noho izany dia manana andraikitra lehibe eto amin’ny firenena izy. Isika tsy mitaky ny fiverenany fa efa vitan’ny fanapahankevitra tany Dar Es Salam farany teo izany fa tsy maintsy mody izy. Tsy tokony ho adihevitra intsony ny securité fa aoka isika hifanome Tanana. Ny fahamaroantsika hoy Mamitiana dia midika fa vonona amin’ny fampandrosoana. Be dia be ny fampanantenana nataon’ilaikely iny, fa ireo olona napetrany teo ireo dia olona tsy tokony hitondra fanjakana. Ny frantsay aza hoy izyefa nilaza fa mbola zaza loatra Rajoelina ka tsy tokony hirotsaka. Noho izany dia tsy any ny safidin’ny Malagasy raha hisy izany fifidianana izany. Ireo olona manodidina azyireo no nanabotry ny Malagasy tamin’izao krizyizao. Ny antsika dia tsotra ihany hoy Mamitiana dia mody i Dada. Momba ny tolona dia nambarany fa mitohy hatrany ny tolona ataontsika. Ny antsika teto hoy izy dia fahamarinana ary tsy noentina tamin’ny fandrobana ny tolona fa ny ara-dalàna ihany. Mikasika ny fanelanelanana ataon’ny FFKM dia nilaza i Mamitiana fa manohana ny hevitr’ireto filoham-piangonana ireto satria ray amandreny ara-pivavahana izy ireo. Raha natao ny fampihavanam-pirenena hoy izy kanefa olona tsy fantampantatra no nanao izay fampihavanana izay. Izay natsangan’ny fat ho ray amandreny teto dia mitovy amin’ilaikely iny avokoa. Noho izany hoy Mamitiana dia mamporisika ny fandraisan’andraikitra ny FFKM isika. Manana lanja lehibe ny fampihavanam-pirenena miaraka amin’ny FFKM. Ny filazana ny tsy fahamarinana teto no tsy itiavan’ny mpitondra ny FFKM kanefa arakaraky ny handavany azy no mahalava ny krizy ary mila ho latsaka an-kady ny firenena. Tsy miala eto isika hoy Mamitiana raha tsy tonga eto I Dada.
RAVELONANOSY MAMITIANA : MISAVOROVORO NY SAIN-DRAJOELINA
Auteur Solo Razafy*Publié le 27 décembre 2012 Catégories Politique
6 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : MANOHANA NY HEVITRY NY FFKM ISIKA »
27 décembre 2012 à 20 h 48 min
IANAREO CT SY CST ,MANODIDINA ANI RAJOELINA HOY ,HALATSAO hoy aho izy ,fa raha izao hanaraka ny onjan i Rajoelina sy ny FFKM eo ianareo dia hanjaka FOLO TAONA I raJOELINA sy ny tariny ka Ho fara gidany maimbo ity Tany ity
Izao dia hanao ny asako
aleo hisisika hirotsaka eo io mpanongam- panjakana io fa izahay de hiandry an’ zay hanao propangande aty à quartiernay aty fa eo zahay vao hamaly faty ary ataonay miboridana anie reo TGV reo e ra tsy hoe angaha hitondra vozona aron’ ny tandroka mirongo basy e
Mbola manatavitavy tena ao amin’ny fitondràna hany ve reo mpanohitra sasany manamafy ny maha aradalàna ny fitondran’ny mpanongana. Ny zavatra tadiavin’ny vahoaka ity tsy misy tanteraka: fodian’Andriamatoa Ravalomanana ary ny filatsahany indray, ny famoahana ny gadra politika, ny famoahana ny haino amnjery tsy misy teritery, ny fanenjehana ny mpanao politika milaza ny marina sns.
Toa ny kibo sy ny takolak’izy reo fotsiny no mihamatavy akoatrany kabary matavy atao eo am Magro
Mbola manatavy tena sy takolaka ao amin’ny fitondran’ny mpanongana ihany ve reto mpanohatra be kabary sy tsara rindra reto e?
tsy misy tanteraka na ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana na ny fivoahan’ny gadra politika, ndrindra moa fa ny fanokafana ny haino amanjery izay nidin’ny mpanongana
Toa ny kabary sy ny tarehy fotsiny no matavy fa ny zavatra atao tsy misy na ny iray aza fa miray tsikombakomba am’ny mpanongana fotsiny ao
28 décembre 2012 à 10 h 32 min
Tsy woe akory hors sujet ity zavatra ataoko ity fa fahatsiarovna any i Noro mpihira niaraka taminy Vola ary koa ry Railovy izay hiaraha mahalala fa nindaosiny ny fahafatesana omaly ka ireto misy hira vitsivitsy taminy fahavelomany.Izahay moa dia miara-miory aminy fianakaviany iray manontolo ny anarany moa dia Ranorovelo eugénie
28 décembre 2012 à 14 h 01 min
lasa nanao vakansy any maorisy I raJoelina ,Miandry miarak @ leaders mouvance Ravalomanana ,miandry ny Onjan i raJoelina e sady tsy mosary koa @ izay .
Précédent Article précédent : N’IZA N’IZA MANAKANTSAKANA NY FILOHA RAVALOMANANA DIA TSY HANAIKY INTSONY IZAHAY
Suivant Article suivant : TSY MISY IDIRAN’NY ZANDRIKELY NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC